Mbido AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKWOTKWỌ AKW FOKWỌ Ndị egwuregwu bọọlụ United States Jozy Altidore Child Story Plus Ihe Na-adịghị Agbanwe Eziokwu
LB na-egosi Full Story of a Football Genius onye kasị mara aha "Anụ ọhịa ahụ".
Ụdị akụkọ nwata anyị nke Jozy Altidore, gụnyere Untold Biography, na-ewetara gị akụkọ zuru oke nke ihe omume ama ama site n'oge ọ bụ nwata ruo taa.
Nyocha nke Beast's Bio gụnyere nzụlite ezinụlọ ya, akụkọ ndụ tupu ama ama, ịrị elu na akụkọ ama ama, mmekọrịta na ndụ onwe onye.
Ee, onye ọ bụla maara banyere ọnụnọ anụ ahụ siri ike ya na igbe ahụ. Agbanyeghị, ọ bụ naanị mmadụ ole na ole na-atụle akụkọ ndụ Jozy Altidore, nke na-atọ ụtọ nke ukwuu. Ugbu a, n'enweghị ihe ọ bụla ọzọ, ka anyị malite.
Jozy Altidore Child Story - Mmalite Ndụ na Ezinụlọ:
Malite na, Josmer Volmzy "Jozy" Altidore a mụrụ na 6th ụbọchị nke November 1989 na Living Stone na New Jersey.
Anyị maara na New Jersey bụ ebe ọmụmụ nke ọtụtụ ndị ama ama, gụnyere Queen Latifah, Tom Cruise na Bruce Willis.
Jozy bụ ọdụdụ nwa n'ime ụmụaka anọ nne ya Giselle na nna, Joseph Altidore mụrụ.
Nne na nna abụọ ahụ bụ ndị mbata bịarutere USA ka ha gbanarị ọchịchị obi ọjọọ nke onye isi ala Haiti mbụ 'Papa Doc' Francois Duvalier.
Ọ bụ ezie na a mụrụ Jozy na New Jersey, ezinụlọ ya kwagara Boca Raton na Florida mgbe ọ ka dị obere.
Ọ bụ na Boca ka Jozy tolitere na ụmụnne ya nwanyị abụọ Lindsay na Sadia, yana nwanne ya nwoke nke okenye Janak, bụ onye ya na ya na-egwu bọl n'ime ụlọ.
Ụmụnna ndị na-eme egwuregwu ejighịzi ịgba bọl n'ime ụlọ nke ọma, bụ́ ndị n'agbanyeghị otú ha si gbalịsie ike ime ka égbè ha dị ntakịrị, mebie ngwá ọrụ ụlọ ole na ole, gụnyere ndị na-agba n'uko ụlọ ha.
“Ọ bụrụ na ị bịarute n'ụlọ m, otu ụlọ ahụ, ndị niile na-efe ụlọ anaghị agbaji.”
Jozy na-echeta ihe ndapụta ahụ.
Giselle (papa Jozy) bụ onye gosipụtara na ụmụ ya agaghị akwụsị imebi ihe kpebiri na ha agaghị edozi ndị na-agba ya ma rịọ ka ha tinye mmasị ha site na igwu egwu na Garage.
"Ọ gwara anyị ka anyị kpọọ ụgbọala. Anyị mekwara nke a ọtụtụ. Anyị na-emegharị mgbe niile na-agbapụ ma na-egwu onye na-eche nche. "
Jozy Altidore Biography Eziokwu - Bulọ Ọrụ Buildup:
Jozy bụ naanị 8years ochie mgbe ọ na-eme nzọụkwụ mbụ iji malite Career na football site na debanyere aha na Schulz football academy nke e meghere ọhụrụ na Bocca n'oge ahụ.
Mgbe Jozzy na-agụmakwụkwọ na Schulz, Jozzy gbara ọtụtụ asọmpi 3-v-3, ụdị asọmpi egwuregwu nke onye nkụzi nke ụlọ akwụkwọ (Joseph Schulz) kwenyere na ọ dị mkpa ịzụlite nkà na obere oghere.
"Ọ zụrụ anyị dị ka anyị bụ obere ndị na-enwe ọganihu, ma o mere ka ọ bụrụ ihe na-atọ ụtọ. Ọ kpọrọ ya ihe ọchị. Ọ dị njọ n'echiche na ịchọrọ imeri na ịchọrọ ikpori ndụ.
Kwa ụbọchị, ị chọrọ ime nke ahụ. O nwere ụzọ. Achọghị m ka m tufuo otu ụbọchị”.
Jozy nke Joseph Schulz na-echeta, ya na ụmụaka ndị ọzọ nọ n'okpuru.
Egwuregwu nke football nwere ọtụtụ afọ na-enwe ntụrụndụ ma na-arụ ọrụ na Schulz Academy tupu ya ahapụ IMG Soccer Academy ebe ọ malitere ọrụ ntorobịa ntorobịa n'afọ 2004.
Jozy Altidore Biography - Tozọ Na-ewu ewu:
Jozy nọrọ afọ abụọ na usoro ntorobịa nke IMG Soccer Academy tupu ọ kwaga New York Red Bulls, ebe o mere mpụta mbụ ọkachamara ya na August 2006.
Ọrụ ya dị egwu na Red Bulls mere ka ọ kwaga n'akụkụ Spanish Villarreal, ebe ọ ghọrọ onye ọkpụkpọ America mbụ meriri na La Liga n'oge ihu ya na Athletic Bilbao.
Nlegharị football sochirinụ hụrụ Jozy ka ọ kwụrụ ụgwọ na Segunda División club Xerex CD, Hull City AFC na Turkish Super Lig club Bursaspor.
Jozy Altidore Bio - Na-ewu ewu:
2011 bụ mmalite nke ihe ọhụrụ maka Jozy bụ onye ego mgbazinye ego kwụsịrị mgbe ọ bịanyere aka na Dutch Eredivisie, AZ Alkmaar na July nke afọ ahụ.
Ọ bụ na AZ Alkmaar ka Jozy nọrọ oge abụọ na-edekọ ihe mgbaru ọsọ 51 na 93 anya. Ọ bụkwa akụkụ nke klọb mmeri 2012-13 KNVB nke klọb wee wuchaa dị ka onye na-eduzi asọmpi ahụ.
Agbanyeghị, ama ama ka bụ ihe Jozy ga-aghọta nke ihe ngosi ya mara mma dọtara uche ebe ebe ọzọ ọ na-aga, Sunderland.
Otú ọ dị, Jozy emeghị ihe masịrị ya na ndị otu egwuregwu mbụ, na-edekọ naanị ihe mgbaru ọsọ 3 n'ime ngosi 52.
N'ihi ya, e rere ya na Toronto FC ebe ọ na-anụ ụtọ ịmaliteghachi ọrụ, na-eme ka ọ bụrụ ihe mgbaru ọsọ n'ihe dị ka egwuregwu 2 wee gaa n'ihu wee nweta ihe mgbaru ọsọ mmeri na asọmpi 2017 nke nyere Toronto FC mbụ MLS Cup.
Jozy Altidore na Illiana Blackshear Love Story:
Jozy enwewo njikọ ịhụnanya na ụmụ nwanyị abụọ. Anyị na-ewetara gị nkọwa gbasara mmekọrịta ndụ ya.
Nke mbụ bụ mmekọrịta ya na onye na-egwu bọl mbụ bụ Illiana Blackshear. A na-akọ na duo ka ya na 2011 zoo nzuzo mgbe Jozy na-egwu AZ Alkmaar. Otú ọ dị, ọ dịghị onye ọ bụla gosipụtara mmekọrịta ahụ.
Akụkọ ịhụnanya na Sloane Stephen:
Ka ọ dị ugbu a, Jozy nọ na mmekọrịta dị elu na mmekọrịta ọkpụkpọ ọkpọ ọkpọ ọkpọ Sloane Stephen. Duo nke bidoro dị ka ndị enyi nwata tolitere na Florida.
Ọ bụ naanị na 2016 ka lovebirds ahụ, nke akpọrọ dị ka Di na Nwunye Ike nke America, jikọtara na ọkwa ịhụnanya.
Jozy wepụtara oge iji hụ ụfọdụ egwuregwu Sloane, inye ya nkwado ọ chọrọ, na mgbe 2 na-agba mbọ na otu ụbọchị Sloane meriri US Open na 2017.
“Ọ gbasiri mbọ ike ịlaghachi n'ebe ọ nọ ugbu a. Agaghị m enwe obi ụtọ karịa. Nne m gwara m n'elu oche, ma ọ dị ya mma.
Anyị abụbu enyi kemgbe ogologo oge, na ịhụ ọganihu ya dịka o nwere bụ ọmarịcha anya ịhụ… Ọ pụrụ iche. Daalụ ya.
Jozy na-ekwusi ike na oge ọkara na-eme ememme enyi ya nwanyị.
Jozy Altidore Biography Eziokwu - A Na-egosi Na FIFA 08:
Jozy, na 2007, nwere ihe ùgwù nke ịbụ otu n'ime ndị na-eme egwuregwu mkpuchi na egwuregwu vidiyo EA Sports FIFA 08.
Ihe mkpuchi ahụ, nke gosipụtara Ronaldinho na Guillermo Ochoa, N'oge na-aga, Jozy nwetara ngụkọta nke ihe mgbaru ọsọ 4 n'ọhụụ ise maka United States n'oge 2007 FIFA U-20 World Cup.
Ihe omume ahụ bịara dị ka ihe ijuanya na nwa Jozy na-eto eto bụ nke ihe yiri ka ọ na-ebugharị ngwa ngwa n'oge ahụ. Dị ka ọ sịrị:
“Atụmatụ ahụ bụ ihe ijuanya zuru oke, mana m na-enwe ekele na m bụ akụkụ nke ihe dị ka nke a. Egwuregwu FIFA, yana aha ya, adịla ogologo oge na ịbụ akụkụ ya n'ụzọ ọ bụla dị egwu
Jozy Altidore Biography - Na-eme Mgbe Ndi Ochichi Uche:
Jozy nwere mgbe ọ bụla ọ chọrọ ịhọrọ mgbe ọ bụla a na-agụ ukwe mba US.
N'ihi ya, onye na-eti ihe na-adịghị etinye aka ya n'obi ya n'oge "Star-Spangled Banner" ghọrọ isiokwu nke nkatọ maka omume ahụ nke e weere dị ka ihe omimi.
Ọ bụ rue 2015 na Jozy kpochapụrụ ikuku banyere ọnọdụ ya n'ụzọ ndị a:
“A zụlitere m dị ka Onyeàmà Jehova. Mama m bụ Onyeàmà Jehova na e nwere ihe ụfọdụ anyị na-adịghị eme, ụbọchị ọmụmụ, ezumike, ihe ndị dị otú ahụ, ya mere (ịghara itinye aka m n'obi) enweghị ihe jikọrọ ya na m na-emegide obodo, ma ọ bụ ịbụ obere ihe. American.
Ahụrụ m obodo m n'anya. Abụ m onye America ọ na-amasị m igwu egwu US, enwere m olileanya na ndị mmadụ ghọtara na ọ bụ ya mere na anaghị m eme ya. "
Jozy Altidore Biography - Nkwado na Nkwado:
Jozy ka ọ dị afọ iri ọfụma na-enwe nkwado na Nkwado site n'ọtụtụ ụdị.
Ha gụnyere Beats By Dre, Jaguar, Adidas, Puma, ụlọ ọrụ ụgbọ elu-Jet Blue, n'etiti ndị ọzọ.
A na-atụ anya na a ga-enweta nkwado ndị ọzọ maka onye na-egbu ihe na-emetụta ụdị egwuregwu ya na nke ọ bụla.
Eziokwu Jozy Altidore - Forhụnanya Maka Haiti:
Ọ bụ ezie na a mụrụ Jozy na New Jersey na USA, ọ kwụsịghị ịmata mba Haiti, mba ndị nne na nna ya kwagara.
N'ikwu nke a, mgbe oke ala ọmajiji tiri Haiti na 2010, Jozy nyere aka na ọrụ enyemaka site na iweta onyinye.
Onye na-eti ihe ngwa ngwa na-aza Ụdaisi onyeisi ala US bụ ndị kọrọ banyere Haiti, Elsavador na mba ndị dị na Africa dịka oghere S **.
N'ịzaghachi na ebubo ebubo ebubo, Jozy tweeted foto nke onwe ya, PK Subban na Usain Bolt na ihe odide:
"Atọ s ** thole dudes naanị ibi nrọ ahụ, @realdonaldtrump".
Olee otú mmadụ nwere ike isi bụrụ onye nweere onwe ya n'ala nna nna ya?
Jozy Altidore Ndụ Nke Onwe:
Jozy bụ onye na-arụsi ọrụ ike nke na-arụsi ọrụ ike ma na-agbasapụ aka na-agbaso ihe ọ na-ekwere. Àgwà ya na ekele maka ndị ọzọ n'èzí egwuregwu na-agba akaebe banyere nzụlite dị umeala n'obi ya.
Tụkwasị na nke ahụ e kwuru na mbụ bụ ọrụ enyemaka ndị mmadụ na-eme ka ọ bịa dị ka ndị na-agba ụkwụ na-agbalị ime ihe dị iche na ụwa na-enweghị isi.
Nyochaa: Daalụ maka ịgụ Jozy Altidore Child Akụkọ ya na enweghị akwụkwọ akụkọ efu. Na LifeBogger, anyị na-agbasi mbọ ike maka izi ezi na ịkwụwa aka ọtọ. Ọ bụrụ n'ịchọta ihe na-adịghị mma, biko kọọrọ anyị ya site na ịza ajụjụ n'okpuru. Anyị ga-eji nkwenye gị kpọrọ ihe mgbe niile.
Akwụkwọ Villarreal CF